FANOLORANA MEDALY HO AN’IREO MPIARA-MIASA AMIN’NY RAVINALA AIRPORTS - Ravinala Airports
FANOLORANA MEDALY HO AN’IREO MPIARA-MIASA AMIN’NY RAVINALA AIRPORTS
Nanolotra medaly ho an’ny 77 amin’ireo mpiara-miasa aminy ny Ravinala Airports sy ny solontenam-panjakana. Andro iray izay nankasitrahana ireo ezaka nataon’ny mpiara-miasa iray manontolo ary naninganana manokana ireo mpiasa tranainy sy naharitra indrindra. Tamin’io ihany koa no nanaovana ny tatitry ny zava-bita rehetra nisongadina ny taona 2019.
Nandritra ny lahateniny dia niarahaba manokana ny herim-po sy vitrika ary ny ezaka ataon’ireo mpiara-miasa mba hahavitana tsara ny asany hatrany ny Tale Jeneralin’ny Ravinala Airports, Andriamatoa Patrick Collard. Mpiara-miasa lahy sy vavy miisa 77 arak’izany no nosalorana medaly ho an’ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo, ka:
14 ireo nahazo medaly volafotsy sy alimo
17 nahazo medaly volafotsy
Ary 46 nahazo medaly alimo
Nisongadina tamin’ity lanonana ity ny lanja lehibe omen’ny Ravinala Airports ireo mpiasa ao aminy. Hita taratra izany tamin’ny ezaka natao hanomezana fiofanana ho an’ireto farany. Nandritry ny telo taona farany dia niakatra avo folo heny ny tetibola natokana ho an’ny fampiofanana ny mpiasa ary karazana fiofanana miisa 80 no natolotra hatramin’ny taona 2017. Porofon’izany dia nitentina 539 tapitrisa Ariary ny tetibola natokana ho an’izany ny taona 2019.
Nahafahana nanao ny tatitry ny zava-bita nisongadina tamin’ny taona 2019 ity lanonana ity fa nahafahana ihany koa namelabelatra ireo fikasana amin’ny taona 2020.
Feno fahombiazana tanteraka raha iny taona 2019 iny ho an’ny Ravinala Airports. Ho an’ny seranam-piaramanidina Antananarivo, dia nahatratra mpandeha miisa 1 tapitrisa tamin’ny desambra 2019, ary mpandeha 216.000 kosa ho an’i Nosy Be. Tarehimarika tsy fahita mihitsy izany nandritra ny 20 taona lasa izay. Izany vokatra izany dia azo noho ny fikirizana sy fiaraha-mientana eo amin’ireo mpisehatra rehetra miaraka amin’ny Ravinala Airports.
Tamin’izany ihany koa no nahazoan’ny Ravinala Airports ny amboara Routes Africa Award 2019. Io amboara azo noho ny ezaka natao teo amin’ny lafiny fampandrosoana sy ny tetikady ara-barotra hampivelarana ny seranam-piaramanidina io, dia mampisongadina ihany koa an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Noho ny fananganana ny seranana iraisam-pirenena vaovao, dia niakatra 8 % ny sidina nisy teto an-toerana tamin’ny taona 2019. Ao ihany koa ireo asa, mivantana sy tsy mivantana, niforona miisa 1.000 nanomboka tamin’ny desambra 2016, fotoana niatombohan’ny fitantanan’ny Ravinala Airports ny seranam-piaramanidina Antananarivo sy Nosy Be. Noho izany antony rehetra izany, dia nahazo an’ity amboara ity ny seranam-piaramanidina Antananarivo nanoloana an’ireo seranam-piaramanidina tao Soudan, Ouganda, Angola ary Cap Vert.
Ity taona 2020 ity dia mbola ho feno tanteraka ho an’ny Ravinala Airports, satria dia hisy ny fitokanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao an’Antananarivo. Hanaraka an’izay avy eo ny hetsika iraisam-pirenena an’abakabaka, AVIADEV, ny 6 ka hatramin’ny 8 may, izay ahitana an’ireo seranam-piaramanidina maro hafa sy ny kaompaniam-pitaterana an’abakabaka, ka hanosika ihany koa ny fisian’ny lalan-tsidina vaovao ho an’ny firenena maro, ary indrindra ho an’i Madagasikara. Ankoatra izay, amin’ity taona 2020 ity no hatsangana ny Fondation Ravinala Airports, ary ny fangatahana ny fanamarinana ISO 9001 sy 14001.